आस्था राउत प्रकरणमा बोले प्रमोद खरेल: आस्था विनाकारण रिसाइन होला त ? दुवैको दोष हुन् सक्छ ! दुवै पक्षलाई अनुसन्धान गर्नु पर्छ – Khabar Silo
काठमाडौँ । गायिका आस्था राउत पछिल्लो समयमा निकै तनावमा छिन् । आस्था अहिले सांगीतिक कार्यक्रमका लागि सिक्किम गएकी छिन् । केहि दिन अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको घटनापछि वि’वादमा तानिएका आस्थावि’रुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राउतविरुद्ध आइतबार पक्राउ पुर्जी दिएको हो । यस विषयमा थुप्रै कलाकार,गायक गायिका र सर्वसाधारणहरुले विभिन्न टिक्का टिप्पणी गरेका छन् । त्यसैमध्ये चर्चित गायक प्रमोद खरेलले गायक गायिकाको बिषयमा बोल्ने एउटा पनि संस्था नभएको अनुभव आफूलाई भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो भनाई सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेका छन्–‘आस्थालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अनुमती पाइसकेको छ । जहाँसम्म लाग्छ, यो निर्णय बाहिरिएको सिसिटिभी फुटेज भन्दा पनि उनले फेसबुक लाइभमा दिएको अभिव्यक्ती र त्यसमा प्रयोग भएका शब्दहरु नै हुन् । जुन आफैमा केही अस्वभाविक र कलाकारलाई सुहाउँदो छैन ।’
बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित चेकजाँचका क्रममा प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत आ’क्रोशपूर्ण भिडियो लाइभ गरेकी थिइन् ।
यहि विषयलाई लिएर चर्चित गायक प्रमोद खरेलले सामाजिक सञ्जालमा गुनासो पोखेका हुन्। उनले एक स्टाटस लेख्दै आस्थाको बारेमा बोल्ने कुनै सङ्घसंस्था नभएको गुनासो गरेका हुन् ।
नम्रताको जाइरा असफल
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ पहिलो पटक एक्सन अवतरमा चलचित्र “जाइरा” मा प्रस्तुत भएकी थिइन् । उनको नयाँ अवतरलाई हेर्न दर्शक अभाव नहुने अपेक्ष राखीएको थियो । तर, चलचित्रले निराशाजनक व्यापार गरेको छ । चलचित्र “जाइरा”मा नम्रता मार्शल आर्ट खेलाडीको भुमिकामा प्रस्तुत भएकी थिइन् । उनले चलचित्रमा आत्मसात् गर्न ८ महिना लामो मार्शल आर्टको तालिम लिनुका साथै […]
Posted on September 30, 2021 Author khabar silo
एक चोर सलमान खानको घरभित्र पसेको रोचक किस्सा बाहिरिएको छ । हुन त बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको घरको ढोका हरेक दीनदुखीहरुको लागि खुला रहन्छन् । उनको परिवार निकै ठूलो छ र यहाँ मानिसहरुको आवतजावत चलिरहन्छ । परिवारका सदस्यका साथीभाइ लगायत परिवारमा यति धेरै पाहुना आउँछन् कि एक दिन उनको घरमा चोर पस्दा समेत परिवारका सदस्यले […]
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले दिइन् राजीनामा, संसदको अर्को बैठक चार बजे